Talaado, Nov 24, 2020-Raysal wasaaraha Soomaaliya oo golaha ammaanka u gudbiyay warbixin ku saabsan guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay – LaacibOnline
Talaado, Nov 24, 2020-Raysal wasaaraha Soomaaliya oo golaha ammaanka u gudbiyay warbixin ku saabsan guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay
November 24, 2020 Abdirisaaq	0 Comments
Wararka Maanta- Talaado, Nov 24, 2020
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo golaha ammaanka u gudbiyay warbixin ku saabsan guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay
Talaado, November, 24, 2020 (HOL) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa golaha Ammaanka ee qaramada Midoobay la wadaagay warbixin ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo sida dowladda ugu diyaar garoobayso inay qabato doorasho hufan.Raysal wasaaraha ayaa u sheegay golaha ammaanka in howlaha doorashooyinku marayaan meel wanaagsan islamarkaana guddiyadii loo magacaabay doorashooyinka ay howlo wanaagsan hayaan.
Waxaa uu raysal wasaaruhu hoosta ka xarriiqay in qoondada haweenka ee 30% ah la xaqiijindoono.
” Way naga go’an tahay in aan ilaalinno qoondada haweenka ee 30%, xeer hoosaadkii baarlamaanku dhawaan ansixiyay ayaa si cad u qeexaya in ujeeddada loo socdaa tahay in matalaadda haweenku gaarto 50%”, ayuu yiri raysal wasaaruhu.Hadalka Raysal wasaaraha ayaa kusoo aadaya xilli uu khilaaf adag ka taagan yahay guddiga doorashooyinka iyadoo murashixiinta mucaaradku dalbadeen in la bedelo dhammaantood.
11/24/2020 1:03 AM EST
Talaado, November, 24, 2020 (HOL) – Dowlad goboleedka Puntland ayaa xaalad degdeg ah uga dhawaaqday gobolka Bari halkaas oo ay dhibaatooyin culus ka geysteen roobab dabelyo wata oo maalin ka hor ka dhuftay gobolkaas.
11/24/2020 12:10 AM EST
Talaado, November, 24, 2020 (HOL) – Madaxweynaha Doorashadii dhaweyd looga guuleystay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay hannaan uu xilka kula wareegayo madaxweynaha cusub ee dalkaas Joe Biden, laakiin Trump ayaa wacad ku maray in uu sii wadi doono dacwadiisa dhinaca sharciga.
11/24/2020 12:04 AM EST
Talaado, November, 24, 2020 (HOL) -La taliyaha dhinaca Amniga Dowladda Federaalka Itoobiya Gedu Andargacho ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
← Somalia Intensifies Crackdown on Illicit Kenyan Khat
Algeria oo u gudubtay wareegga labaad →
Isniin, Oct 19, 2020-Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo madaxda dowladda ugu baaqay inay siidaayaan weriye Cabdullaahi Kulmiye
Khamiis, July 2 , 2020-Urur udooda xuquuqda naafada Soomaaliyeed oo cambaareeyay dilkii gudoomiyihii naafada Baydhabo
Talaado, Oct 13, 2020-Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Jowhar